အဓိကပါဝါ:30 KW အဆင့်သုံးဆင့်
စွမ်းရည်:1000-2000 ကီလိုဂရမ် / နာရီ
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအတောင့်ကြိတ်ခွဲစက်ကိုကျယ်ပြန့်သောဆလင်ဒါပုံသဏ္ဌာန်သေ။ ဒေါင်လိုက်တပ်ဆင်ထားသည်. ဒီကြီးမားတဲ့စက်မှုအစာတောင့်ကြိတ်စက်နို့တိုက်ကျွေးရေးကိရိယာများပါဝင်သည်, မာကြောခြင်းနှင့် tempering device ကို, အေးစက်ကိရိယာ, စာနယ်ဇင်းအခန်းထဲကဂီယာစနစ်, Overload ကာကွယ်မှုနှင့်လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်. ဤလက်စွပ်အမျိုးအစားစက်မှုဇုန်လုံးလေးများစက်ရုံများကိုအများဆုံးအကြီးစား feed ကိုလုံးလေးများထုတ်လုပ်မှုအတွက်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုသည်,စီးပွားဖြစ်အစာထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံလိုပဲ,ကြက်မွေးမြူရေးခြံကြီး,စီးပွားဖြစ်အစာထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံစသည်တို့ကို. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤစက်မှုတောင့်တင်းသည့်စက်တွင်အချောလေးများနှင့်ကောင်းမွန်သောအာဟာရရှိသောအစာတောင့်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည့် conditioner တပ်ဆင်ထားသည်။.
ဒီစက်မှုအစာကျွေးတောင့်စက်ပြောင်းဖူးအညှာ pelletizing များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်, ပဲရိုးတံ, ပန်းပွင့် sapling, ချိုသောအာလူးဝိုင်, Clover မြက်, ကောက်ရိုးကိုမုဒိမ်းကျင့်သည်, စသည်တို့. ကျွဲနွားများအတွက်အစာကျွေးခြင်းသို့, ဝက်, နွားမ, သိုး, ယုန်, ကြက်သား, ဘဲ, ငါး, စသည်တို့. ဤလက်စွပ်သေဆုံးကျွေးသောစက်သည်အလယ်အလတ်စားကျက်စားစက်ရုံများနှင့်မွေးမြူရေးခြံများတွင်အစာကျွေးရန် ဦး စားပေးကိရိယာဖြစ်သည်. ဤသည်လက်စွပ်စက်မှုအစာကျွေးတောင့်ကြိတ်မွေးမြူရေးအစာကျွေးခြင်းငှါအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများ pelletize နိုင်ပါတယ်, ရေနေအစာကျွေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာ, မြက်မှုန့်နှင့်ဒါ.
အားလုံး - သံမဏိလမ်းခွဲ, ထိန်းချုပ်မှုမူရင်းသွင်းကုန်အကြိမ်ရေ converter ကိုအတူ configured, အညီအမျှနှင့်တိကျစွာအစာကျွေး.
အားလုံး - သံမဏိ modulator ကို, ရေနွေးငွေ့နှင့်အစာကျွေးခြင်းအကြားထိရောက်သောဆက်သွယ်မှုကိုအာမခံသည်, အလွယ်တကူသန့်ရှင်းနိုင်စေရန်တံခါးဖွင့်ထားသည့်အပေါက်နှင့်အတူပြုပြင်ထားသည်.
နှစ်ဆမော်တာ drive ကို. မြင့်မားသော SPB ကျဉ်းမြောင်းသော V-belt drive သည်ဆူညံသံနည်းသောကြောင့်တည်ငြိမ်စွာနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်.
စက်မှုအတောင့်အစာကျွေးခြင်းစက်ကို ၁.၅ မီလီမီတာမှမတူညီသော aperture ချင်းအမျိုးမျိုးရှိသောလက်စွပ်အမျိုးမျိုးနှင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ 12 ကွဲပြားခြားနားသော client များအတွက်လိုအပ်သောကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များအတွက်မီလီမီတာနှင့်ချုံ့အချိုး.
မြန်ဆန်စွာဖြန့်ချိသောဆက်နွယ်မှုရှိသည့်စက်မှုအစာကျွေးစက်တွင်လက်စွပ်ဖြင့်သေဆုံးခြင်းသည်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန် ring ring ကိုအစားထိုးချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်.
အဓိကအချင်းရှိသည့်မော်ဂျူလာသည်ပစ္စည်းကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်စေရန်နှင့်ပစ္စည်းကိုပိုမိုချောမွေ့စေရန်နှင့်တောင့်တင်းခိုင်မာစေရန်အတွက်ပြုလုပ်ထားသည်။. briquetting အချိုးကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် 98%. ထို့အပြင်စက်မှပွန်းပဲ့နိမ့်ဆုံးမှလျှော့ချနိုင်ပါတယ်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ feed pelletizing ဖြေရှင်းချက်သည်အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်. ကွဲပြားခြားနားသောအစာကျွေးခြင်းအမျိုးအစားများအရသိရသည်, ကွဲပြားခြားနားသော output ကို configuration ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်. အလွန်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့် pelletizing ဖြေရှင်းနည်းများရှိသည်. အကယ်၍ သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအသေးစားနှင့်အကြီးစားဖြင့်အစာကျွေးရန်ပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်, အသေးစိတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ်ကြဘူးပါ.
Feeder ဗိုင်းလိပ်တံ, ဝက်အူ, လက်, လှော် 304 အစွန်းခံသံမဏိ.
အစာကျွေးသောမော်တာကိုငါတို့သည်နိုင်ငံတကာစံမော်တာကိုရွေးချယ်ပါ,အရည်အသွေးသည် Motor ထက်အနည်းငယ်ပိုကောင်းသင့်သည် ,အနိမ့်သည့်မော်တာဆူညံသံ, လည်ပတ်မှုလက်ရှိပိုမိုတည်ငြိမ် Overload စွမ်းရည်ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်ပါတယ်!
အရည်အသွေးမြင့်မားသောသံမဏိအနက်ရောင်စက်သီးကို အသုံးပြု၍ Conditioner motor စက်သီး, မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိကို, ပိုမိုမြင့်မားတိကျစွာ, အပူကုသမှုပြီးနောက်ပိုမိုမြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိကို, ပို၍ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်, သက်တမ်းပိုရှည်သည်, စက်သီးဟန်ချက်ညီစမ်းသပ်မှုများသည်ပိုမိုချောမွေ့စွာလုပ်ဆောင်သည်, သော့ခတ်လက်တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်း, တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းအဆင်ပြေခြင်းနှင့်အချိန် - ချွေတာ, နှင့်စက်သီးအားပျက်စီးစေမည်မဟုတ်ပါ!
အေးစက်ဗိုင်းလိပ်တံ, ရေတံခွန်, မူလီ ,မြို့ရိုးပြွန်ဖြစ်ကြသည် 304 အစွန်းခံသံမဏိ
စက်မှုဇုန်အတောင့်တင်းစက်ကိုအဓိကအားဖြင့်လမ်းခွဲသည်, မော်ဂျူလာ, pelleting စက်, ချောဆီအရည်ကြည်စနစ်. အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှုန့်နှင့်အတူရောနှောပစ္စည်းများ၏ဒီဂရီကျော်မဖြစ်သင့်လိုအပ်သည် 15 %. အဆိုပါပစ္စည်းစတော့ရှယ်ယာဘင်မှတဆင့်နို့တိုက်ကျွေးရေး auger ထဲသို့ဝင်. မြန်နှုန်းကိုပြောင်းလဲရန်မော်တာအားထိန်းညှိသည့်အဆင့်လျော့နည်းသောမြန်နှုန်းကိုညှိခြင်းအားဖြင့်, ပစ္စည်းအတန်အသင့်စီးဆင်းနိုင်ပါတယ်. ထိုအခါ tempering ရေနွေးငွေ့နှင့်အတူရောနှောလှော်လှုံ့ဆော်မှုမှတဆင့်စတင်ခဲ့သည်. အဒေါသပြီးနောက်, ပစ္စည်းများ၏အပူချိန်℃ 84 မှ 64 can နိုင်ပါတယ်, နှင့်စိုထိုင်းဆရှိနိုင်ပါသည် 14% ရန် 16%. နောက်ဆုံးတော့, ပစ္စည်းဖွညျးညှငျးစှာရလြှောဆငျးခွငျးမှတဆင့် pelletized ခံရဖို့နှိပ် box ထဲသို့ဝင်.
စက်မှု Pellet စက်၏ဖော်ပြချက်